अनि नारी भएर जन्मिएकोमा अफसोच भयो
- सुमन थापा मगर | मंगलबार, फागुन २४, २०७८
‘यो बेकारको स्टन्ट होजस्तो लाग्छ मलाई । एउटै एंगलमा स्टोरी आएपछि यो विषयमा प्रतिप्रश्न गर्नुपर्नेछ, केही समयअगाडि ब्राको साइज सोधिएको स्टोरी आएको थियो, अहिले छातीको साइज सोधिएको स्टोरी आएको छ, कुरा बुझम् । अनि अर्को स्टोरी के–को साइज सोधिएको विषयमा आउन सक्ला भन्नेमा पनि मैले लख काटिसकेको छु ।’
गत २८ पुसमा शिलापत्र अनलाइनमा ‘वरिष्ठ पत्रकारले जब छातीको साइज सोधे’ शीर्षकसहित मेरो लेख प्रकाशित भएपछिको पहिलो प्रतिक्रिया थियो यो । जुन सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको म्यासेन्जरमा आएको थियो ।
सञ्चारक्षेत्रलाई आवाजविहीनको आवाज भनिन्छ । मैले आवाजविहीनसहित आफ्नै आवाज बन्ने निर्णय गरेँ । मेरो लागि आफूमाथि भएको त्यस्तो व्यहारलाई बाहिर ल्याउनु सजिलो थिएन । लेख लेखिसकेपछि समेत प्रकाशित गरौँ या नगरौँ भन्ने दोधारमा परेको थिएँ । धेरै समयको सोचपछि आफूमाथि भएको हिंसाविरुद्ध बोल्नुपर्छ र लेख्नुपर्छ भन्ने सोचसहित यो विषयमा लेख प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको थिएँ । जब मैले आफूमाथि भएको हिंसाको विषयमा लेख लेख्ने निर्णय गरेँ, नकारात्मक, सकारात्मक दुवै प्रतिक्रिया आउँछ भन्ने थाहा थियो । जस्तोसुकै परिस्थिति तथा प्रतिक्रियाका लागि म मानसिक रूपमा तयार थिएँ पनि ।
कहिलेकाहीँ आफूलाई मानसिक रूपमा तयार राखेको भए पनि बढी नै नकारात्मक प्रतिक्रिया आउँदा आफूले आफैँलाई सम्हाल्न नसकिने रहेछ । त्यस्ता प्रतिक्रियाले कति हदसम्म असर गर्‍यो, त्यो पीडा लेख्न शब्द छैन मसँग । सोचेको भन्दा बढी मानसिक तनाव दिइयो । तारन्तारको फोन, नाम सार्वजनिक गर्न दबाब, हदैसम्मको नकारात्मक प्रतिक्रिया । सम्हाल्न खोजेको भए पनि सकिएन । सुरु–सुरुमा आएका प्रतिक्रियालाई सामान्य भन्दै बसेको थिएँ । तर, त्यस्ता प्रतिक्रिया आउने क्रम रोकिएन । कार्यक्षेत्रमा भएको आफूविरुद्धको हिंसा सार्वजनिक गर्दा अपराध गरेझैँ व्यर्थै यो विषयमा लेखिएछ भन्ने सोच्न बाध्य बनाइयो ।
लेख लेखेकै आधारमा निरन्तर प्रहार भएपछि जीवनमा नारी भएर जन्मिएकोमा अफसोच लाग्यो । मेरो लेख कुनै व्यक्तिप्रति लक्षित थिएन । त्यस्ता व्यवहार गर्ने पुरुष तथा नारीलाई दोस्रो दर्जाका रूपमा लिने प्रवृत्तिविरुद्ध थियो । निरन्तरको मानसिक तनाव तथा दबाबले गर्दा नारी भएर किन जन्मिएको रहेछु भन्ने सोच्न बाध्य भएँ । योभन्दा अगाडि पनि नारी भएकोमा विभेद नभोगेको होइन मैले । यो विषयले भने केही बढी असर गर्‍यो । धेरै नारीले कार्यक्षेत्र तथा अन्य स्थानमा हिंसा भोगेका होलान् । तर, उनीहरू आफूमाथि भएको व्यवहारविरुद्ध आवाज उठाउँदैनन् या आवाज उठाउनै सक्दैनन् । लेख प्रकाशित भइसकेपछि आफूमाथि निरन्तरको प्रहार देख्दा सोच्न बाध्य भएँ । त्यसैले समाजमा नारीहरूले आफ्नो लागि आवाज उठाउन सक्दैनन् । चुपचाप यस्तै हो भन्दै सहिदिन्छन् उनीहरू ।
केही हदसम्म आफूलाई सम्हाल्ने प्रयास गरिरहेकै थिएँ । हद त तब भयो, जब मैले नाम मात्र सुनेको र व्यक्तिगत रूपमा नचिनेको व्यक्तिले चर्चामा आउन लेखेको, बार्गेनिङ गरेर घटना लुकाउने प्रयास गरेको र केही व्यक्तिलाई आक्षेप लगाउँदा सबैलाई एउटै घानमा मुछिएको आरोप लगाए ।
‘आफ्नो नाम गोप्य राखेर पीडकको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा पीडितहरूले आफ्नो नाम त सार्वजनिक गरे नै, पीडकहरूको नाम गोप्य राखेर अरु वरिष्ठहरूको नाकमा दिसाको टीका लगाइदिए । त्यही कामलाई पत्रकारको हितमा काम गर्छौं भन्ने संघसंस्थाहरू लोलेपोते भाषामा ढाकछोप गर्न खोजिरहेका छन् । के दुई जनाको बचाउका लागि दर्जनौँले दिसाको टीका लगाएर बार्गेनिङमा कुरा मिलेपछि दुई जनाको नाम गोप्य राख्न खोजिएको त होइन ? कुरा स्पष्ट आउनुपर्छ । हैन भने जुन दिन स्पष्ट हुन्छ, त्यही बेला हिसाबकिताब हुन्छ अहिलेलाई यत्ति ।’
जब सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा यो स्टाटस देखेँ, अनि दिमाग रन्थनियो, आफूलाई सम्हाल्नै सकिनँ । जबकि प्रचारका लागि लेखियो, स्टन्ट हो भन्दासम्म सामान्य सोचेर बसिरहेको थिएँ । सामाजिक सञ्जालमा यस्तो लेख्नेलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु– के बार्गेनिङ गर्नेले आफूमाथि भएको दुर्व्यवहारका विषयमा लेख्छन् होला ? अनि तपाईंलाई जोगाउन मैले नाम नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने ?
नाम सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्ने लेखकको निर्णय हो । यहाँसम्म कि कुनै व्यक्तिले समाचारमा आफ्नो नाम सार्वजनिक गर्न नचाहेको अवस्थामा समेत स्रोतका अनुसार भनिन्छ, या परिवर्तित नाम भनिन्छ । यसका साथै स्टन्ट र चर्चामा आउन मिडियाबाजी गरियो भन्नेलाई मेरो प्रश्न छ– के भोलि तपाईंकै घर, आफन्त वा नजिकका छिमेकी दिदीबहिनीले यस्तो दुर्व्यवहार भोगेको तपाईंले सुन्नुभयो भने सहेर बस्नुपर्छ, इज्जत जान्छ, बढी स्टन्ट नगर, अब घरबाट बाहिर निस्कने होइन, चुपचाप लागेर बस्ने हो, शरीर छोप्ने कपडा लगाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिनुहुन्छ, या हिंसाविरुद्ध बोल्न सिकाउनुहुन्छ ?
नारीमाथि हुने कुनै पनि किसिमका हिंसाविरुद्ध आवाज बुलन्द बनाउनु आजको आवश्यकता हो । सकिन्छ सहयोग गरौँ, सकिन्न भने नारीको चरित्रमाथि प्रश्न गर्ने र व्यक्तिगत जीवनमा प्रहार गरेर उनीहरूलाई हतोत्साहित नगरौँ । उनीहरू पनि आफ्नो जीवन आफ्नै तरिकाले बाँच्न पाउँछन् ।
सामाजिक सञ्जालमा यस्ता प्रतिक्रिया आउँछन् । यो सामान्य हो । तर, धेरै मानसिक तनाव लिन नसक्ने मलाई यस्ता विभिन्न प्रतिक्रियाले धेरै नै विचलित बनायो । नेपालीमा एउटा उखान छ– चोरले सुरुमा नै म चोर होइन भन्दै खुट्टा उचाल्छ । यहाँनिर यस्तै भयो । आरोप तथा नकारात्मक प्रतिक्रियाले यो हदसम्म भयो कि लेख लेखेकै आधारमा व्यक्तिगत जीवनमा प्रहार हुन थाल्यो । 'श्रीमान्‌को अनुमतिबिना लेख लेखिएको होला, नत्र यस्तो विषय सार्वजनिक गर्न नदिनुपर्ने'लगायतका कुरा आउन थाले । हो, म मान्छु, श्रीमान्–श्रीमती एकअर्काको सहारा हुन्, जीवनका हरेक निर्णय लिँदा एकअर्काको सल्लाह हुनुपर्छ । तर, यसको मतलब श्रीमान्‌को आदेशानुसार नै चल्नुपर्छ भन्ने कुन शास्त्रमा लेखिएको होला ? आफ्नो लागि नारीले निर्णय लिन श्रीमान्‌कै अनुमति लिनुपर्ने ?
विभिन्न नकारात्मक प्रतिक्रिया दिने, लेख लेखेकै आधारमा व्यक्तिगत जीवनमा नै प्रहार गर्ने समाजका प्रतिष्ठित व्यक्ति नै हुन्, जसबाट यस्तो प्रतिक्रियाको अपेक्षा थिएन । समाजमा उनीहरूको एउटा इज्जत छ र शिक्षित वर्गभित्र उनीहरू पर्छन् । पोखराको पत्रकारिता क्षेत्रको इज्जतमाथि धावा बोलेको थिइनँ, मैले त नारीमाथि हुने र आफैँले भोगेको हिंसाविरुद्ध आवाज उठाएको थिएँ । तर, नसोचेको तथा समाजका लागि उदाहरण भएकाले नै पोखराको पत्रकारिता क्षेत्रलाई बद्नाम गर्‍यो, सबैलाई एउटै स्थानमा राखेर हेरियो, बार्गेनिङ गरेर घटना लुकाइयोजस्ता विभिन्न आरोप लगाइयो । जब शिक्षित भनिएकाले नै नारीले आफूमाथि भएको हिंसाविरुद्ध आवाज उठाउँदा उल्टै उसको चरित्रमा प्रश्न उठाउँछ र व्यक्तिगत जीवनमा धावा बालिन्छ भने कसरी नारीले आफूलाई पेसागत वा अन्य स्थानमा सुरक्षित सोच्ने ?
हामीजस्ता बोल्न र लेख्न सक्नेलाई त आफूमाथि भएको हिंसाविरुद्ध आवाज उठाउँदा अनेकन प्रश्न गरिन्छ, व्यक्तिगत जीवनमा नै प्रहार गरिन्छ र चरित्रमाथि नै प्रश्न गरिन्छ भने केही दुर्गम क्षेत्रका महिलाले यो विषयमा किन बोल्न सक्दैनन् भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । कहिलेकाहीँ लाग्छ, त्यस्ता नकारात्मक प्रतिक्रिया दिने र नारीले आवाज उठाउँदा त्यस्ता प्रश्न गर्नेको समेत यसमा कुनै गल्ती छैन । गल्ती त हाम्रो हुर्काइ र सिकाइको हो, जसले नारीलाई सधैँ दोस्रो पुस्ताका रूपमा चित्रण गरिरह्यो । उनीहरूलाई दोस्रो दर्जाका रूपमा चित्रण गरेर पितृसत्तात्मक सोचलाई निरन्तरता दियो । यदि कुनै महिलाले यसरी नै हिंसाविरुद्ध आवाज उठाउने कोसिस मात्र गरिन् भने पनि उनीहरूलाई यस्तै–यस्तै लाञ्छना लगाएर हतोत्साहित बनाइन्छ ।
तर, समय अहिले परिर्वतन भइसकेको छ । नारीले पनि पुरुषसरह हरेक कार्य गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित गरिसकेका छन् । त्यसैले परिर्वतन आफैँले सुरुवात गर्ने हो, फल्नाले सुरुवात गर्लान्, ढिस्कानाले सुरुवात गर्लान् भन्ने होइन । यति भन्दै गर्दा फेरि अर्को आक्षेप आउन सक्छ– आदर्शले जीवन चल्दैन, समाजमा बसेपछि समाजका नीति नियम मान्नुपर्छ । तर समाज हामीबाट बन्ने हो, त्यसैले परिर्वतन हामीबाट सुरु गर्नुपर्छ । अनि समाजको नीति नियम लागू हुने के महिलाको लागि मात्रै हो त ? या परिवार र समाजको इज्जत जोगाउने ठेक्का नारीको मात्रै हो ? परिवारको इज्जत र समाज परिर्वतनका लागि पुरुषको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ भन्ने हामीले कहिले बुझ्ने ? आफूमाथि भएका हिंसा होस् या अन्य विषय, सबैमा नारीले बोल्न र लेख्न पाउनुपर्छ । जब नारीले यस्ता विषयमा आवाज उठाउँछन् भने उनीहरूलाई हतोत्साहित होइन, प्रोत्साहन गर्नु आजको आवश्यकता हो । नारी पुरुष बराबर भन्ने विषयलाई नारामा मात्रै सीमित बनाउनु हुँदैन ।
नारी कुनै कठपुतली होइनन्, जसलाई चाहेको समयमा नचाउन सकियोस् । उनीहरू कुनै मन्दिरको भगवान् होइनन्, जसलाई चाहेको समयमा पूजा गरिन्छ र मन्दिरको ढोका बन्द गरेर सजाएर राखिन्छ । उनीहरू पनि सामान्य मानिस हुन् । उनीहरूको आफ्नै जीवन र चाहना हुन्छ । त्यसैले उनीहरूलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुस् । समाज र परिवारको इज्जत जाने भन्दै विभिन्न बन्देज लगाउँदै गर्दा उनीहरूको खुसी केमा छ भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । नारी पनि आफ्नो खुसी चाहन्छन् । उनीहरूलाई पनि आफ्नै तरिकाले बाँच्ने र रमाउने चाहना हुन्छ । उनीहरूको खुसीको चाबीका रूपमा परिवार र समाजको इज्जतलाई तेर्स्याइनु हुँदैन । जीवन उनीहरूको हो, उनीहरूले पनि खुलेर बाँच्न पाउनुपर्छ ।
'यहाँ बोलेर र हिंसा सार्वजनिक गरेर के हुन्छ ? नारी झुकेर बस्नुपर्छ, कपडा छोटो लगाएपछि त्यस्तै हो' भन्ने सोच भएका व्यक्तिको अभाव छैन । त्यसैले घर–परिवार, आफन्त वा छिमेकीका नारीले हिंसा भोगेका छन् भने उनीहरूलाई हतोत्साहित होइन, प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । हिंसा भोगेर पनि महिनौँ या फेरि वर्षौं लगाएर घटनालाई सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गरेका नारीको चरित्रमा औँला उठाएर, वर्षौंपछि किन सार्वजनिक गरेको र त्यही समयमा किन भनिएनजस्ता प्रश्न उठाएर हतोत्साहित गर्नुभन्दा हिंसाविरुद्ध बुलन्द आवाज बनेर आएकोमा प्रोत्साहन गर्नुस्, न कि उनीहरूलाई नै नकारात्मक बनाएर होइन । अनि मात्र हरेक नारीमाथि हुने फरक–फरक हिंसाको अन्त्य गर्न सकिन्छ ।
आज ११२औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस पनि । आजैबाट प्रण गरौँ, जब नारीले हिंसाविरुद्ध आवाज उठाउने कोसिस गर्छिन् भने विभिन्न लाञ्छना लगाउँदै उनीहरूलाई हतोत्साहित होइन, प्रोत्साहन गरौँ । उनीहरूको आवाजमा आवाज मिलाउने कोसिस गरौँ । नारीमाथि हुने कुनै पनि किसिमका हिंसाविरुद्ध आवाज बुलन्द बनाउनु आजको आवश्यकता हो । सकिन्छ सहयोग गरौँ, सकिन्न भने नारीको चरित्रमाथि प्रश्न गर्ने र व्यक्तिगत जीवनमा प्रहार गरेर उनीहरूलाई हतोत्साहित नगरौँ । उनीहरू पनि आफ्नो जीवन आफ्नै तरिकाले बाँच्न पाउँछन् ।
समाज नारी र पुरुष दुवै मिलेर बन्ने हो, त्यसमा सुधार ल्याउनु नारीको मात्र ठेक्का होइन । परिवार र समाजको इज्जतका नाममा उनीहरूलाई कुनै पनि अधिकारबाट वञ्चित गराउन खोज्नु उचित होइन । उनीहरूलाई आफूमाथि भएको हरेक किसिमको हिंसाविरुद्ध बोल्न प्रोत्साहन गरौँ ।
नारी दिवसको शुभकामना !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन २४, २०७८, ०७:०४:२६